Marka aad ka fikirto Greece ay u badan tahay aad u malayn ku saabsan buuraha sanayd, jasiiradaha Mediterranean ammaanta badnayd, iyo dabcan ka characters kala duwan oo ka caddooyinka Giriigga. Titan Storm waa Afyare ah in si dhab ah isku daraa intaas oo dhammu waxay ka mid galay. Tani booska Series leeyahay 243 paylines iyo ballamada in aad bixiyaan wax ka badan kaliya theme xiiso leh. Ma danaynaysaa? Well, akhri on.
Series waa horumariyaha technology ciyaaraha ku salaysan baxay Las Vegas, USA. Waxa uu ahaa in ganacsi software soo koraya ee muddo dheer hadda oo uu leeyahay qaar ka mid ah boosaska Lughaya ay credit sida Cleopatra ah, Da Vinci Diamonds naadi iwm.
Titan Storm waa mid ka mid ah kuwa kulan Afyare in dhaco inaad fiiro deg dega ah ee aad idinku ridi indhahaaga ku dul. Waa in qurux badan in ay eegaan! hortegi lahaa ayaa qurux badan oo ka mid ah buuraha iyo gasiiradaha ha ka dhigi goob ugu fiican ee duntu ku. The duntu iyaga qudhooda daboolay calaamado sida ololaya seefo, skulls, qof dumar ah oo qurux badan, meeraha ah qarxeen, iwm. All u muuqdaan in ay ka yimaadeen si toos ah qaar ka mid ah sheekada mythological Greek. Seeftii ololaya oo Calaamooyinka meeraha qarxeen leedahay qiimaha ugu sareeya, halka sidoo kale ay jiraan laba qof oo ah calaamadaha bonus oo ah qaab calaamad Titan iyo calaamad macbudka. Titan waa duurka halka macbudka waa kala firdhi ah.
Labada duurjoogta ah iyo caawimo ku kala firdhi keebka bonus wareega wareejin free ah. Halkan waxaad ka heli 10 dhigeeysa free by default. Sidoo kale, ku duurjoogta ah iyo kala firdhiso ku biiriyo inay u dhaqmaan sida bedel ah oo dhan calaamado kale. Oo weliba, haddii aad dalka kaga badiyeen kasta oo la 5 calaamadaha, multiplier a of 5x si toos ah u codsatay doonaa in aad badisay. The wareega dhigeeysa free sidoo kale loo dib-u-keeni kara caga fidiyana more.
Titan Storm leeyahay 5 duntu iyo 243 paylines. Tan ma jiraan paylines go'an halkan, fursadaha caga guul ah aad u badan tahay in ay ka dhacaan. Ciyaarta ayaa waxaa la ciyaari karaa sida yar sida 25p per wareejin in ay sida ugu badan ee 50 £ per wareejin.
Titan Storm waa mid ka mid ah kuwa boosaska dhif in isku wax walba oo aad u baahan tahay in ciyaarta Afyare a in saamiga xaq kaliya. Waxaad theme weyn, qaar ka mid ah animations fantastic, iyo qaar ka mid ah gameplay fiican. Wax badan ka tagay in aad weydiisato, xaq u?